Magnesium L-threonate (778571-57-6) wuxuu u taagan yahay qaabka ugu nuugista badan ee kiniiniyada magnesium suuqa maanta. Magnesium waa macdan caadi ah oo laga heli karo cuntooyin kala duwan waxayna aad muhiim ugu tahay caafimaadka bini'aadamka maadaama loo isticmaalo in ka badan 600 falgallada unugyada jirkaaga.
Magnesium L-threonate waxaa loo sharciyeeyay magaca Magtein waana daawada kaliya ee la xaqiijiyay inay wax ku ool u leedahay hagaajinta heerarka magnesium ee maskaxda. Xubin kasta ama unug kasta oo jirkaaga ka mid ah wuxuu u baahan yahay magnesium si uu si sax ah u guto waajibaadkiisa. Macdantaani waxay wax ka tartaa caafimaadka lafaha, murqaha, wadnaha, iyo shaqada maskaxda ee saxda ah.
Dhanka kale, magnesium sidoo kale waxay ka caawisaa daaweynta dhibaatooyinka dhibaatooyinka hurdada. Waxaa jira noocyo badan oo ah magnesium supplements suuqa maanta, oo ay ku jiraan magnesium oxide, magnesium citrate, iyo magnesium chloride. Foomamkaani waxaa dhammaantood loo isticmaalaa in lagu wanaajiyo heerarka macdanta ee jirka iyo in laga caawiyo horumarinta unugyada iyo unugyada xubnaha.
Warka fiicani waxa weeye in budada magnesium L-threonate budada waxaa si fudud looga heli karaa khadka tooska ah iyo dukaamada jirka ee kugu xeeran. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad ka hesho daawada laguu qoray dhakhtarkaaga si aad u hesho natiijooyin wanaagsan.
Ilaa iyo inta magnesium L-threonate uu waxtar u leeyahay nidaamka jirkaaga, waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo daran marka si khaldan loo isticmaalo ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Sida oo kale markaad qaadatid nooc kale oo nootropic ah, oo ku lug leh dhaqtarkaaga geedi socodka qaadashada waxay kuu xaqiijineysaa tayo iyo natiijooyin cajiib ah.
Sidee ayuu Magnesium L-threonate shaqeeyaan?
Ugu horreyn, shaqada magnesium L-threonate waa in la kordhiyo heerarka magnesium ee jirkaaga iyo in laga caawiyo hagaajinta guud ahaan unugyadaada iyo xubnahaaga oo shaqeynaya. Sidii aan horayba u soo sheegnay, magnesium waxay door muhiim ah ka cayaartaa sidii loo caawin lahaa shaqeynta saxda ah ee unugyada jirkaaga.
Macdanta Magnesium waxaa laga heli karaa cuntooyin kala duwan maalinba maalin kasta oo aad maalin walba qaadatid. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood heerarka macdanta ayaa hoos u dhici kara oo ku gelin kara xaalado caafimaad oo kala duwan. Tusaale ahaan, heerarka magnesium ee hooseeya waxay kuu horseedi karaan dhibaatooyinka niyadda, diiqadda, walaaca, garaaca wadnaha, madax xanuunka, iyo dhanjafka. Ciyaaraha fudud sidoo kale waxaa ku dhaca muruq xanuun iyo qalqal gooyooyinkood markii ay ka helin magnesium ku filan nidaamkooda jirkooda.
Dusha sare ee magnesium caafimaad leh oo laga heli karo cuntadaada, haddii macdanta aysan ku filneyn fududeynta shaqeynta habboon ee unugyadaada iyo xubnahaaga, markaa takhtarkaaga ayaa kuu qori kara Magnesium L-threonate. Jirka bini aadamka wuu kala duwan yahay, sidaa darteedna, qof walba ma la kulmi doono dhibaatooyin la mid ah markii ay la il daran yihiin magnesium-ka. Si kastaba ha noqotee, magnesium L-threonate wuxuu cadeeyay inuu yahay mid xoojin kara magnesium kordhinta. Waxay kuxirantahay heerkaaga magnesium-ka, Magnesium L-threonate waxay siisaa faa iidooyin muhiim ah marka si sax ah loo isticmaalo.
Markaad qaadatid qiyaasta Magnesium L-threonate, daawada ayaa si dhakhso leh u dhuuqda nidaamka jirkaaga waxayna bilaabaysaa inay shaqeyso isla markiiba. Magnesium ku filan oo jidhkaaga ka mid ah ayaa ku keenta in la hagaajiyo hawlaha garashada iyo xusuusta, kor u qaadida shaqeynta saxda ah ee muruqyada jirka iyo dareemeyaasha sidoo kale kor u qaadista qaybaha kale ee jirka oo sifiican u shaqeynaya. Calooshaada, macdanta magnesium waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa ka takhalusida aashitada caloosha waxayna u fududaysaa dhaqdhaqaaqa saxarada saxarada.
Wisepower waa soosaaraha tooska ah ee alaabta ceeriin ee Magnesium L-threonate,
awoodda wax soo saar bille ah illaa 3,000KG.
Is Magnesium L-threonate hurdo fiican?
Haa, Magnesium L-threonate wuxuu u fiican yahay hurdada. Dad badan ayaa dhibaato ku qaba helitaanka hurdo tayo leh, iyo jebinta wareegga hurdada oo aan adkeyn karin. Waad beddeli kartaa habka jiifkaaga ama xitaa waad yareyn kartaa qaadashada kafeynka laakiin weli waad ku guuleysan kartaa inaad hesho natiijooyinka la rabay. Si kastaba ha noqotee, qaadashada kaabis sida Magnesium L-threonate ayaa kaa caawin kara inaad hesho hurdo tayo leh.
Macdanta sida magnesium-ka waxay leedahay saameynno kala duwan habka jirkaaga kaasoo dhiirrigeliya hurdada. Sidaa darteed, magnesium la'aan waxay u horseedi kartaa xaalado caafimaad oo sababi kara hurdo la’aan. Magnesium L-threonate, sidaas darteed, waxay horumarin doontaa howlaha jirka iyo unugyada taas oo aakhirka kaa caawin doonta inaad seexatid. Kordhinta magnesium hurdada waxay ka ciyaaraysaa doorarka soo socda jirkaaga;
(1). Ka caawi jirkaaga iyo maskaxdaada inay isdejiso
Si aad u hesho hurdo tayo leh, maskaxdaada iyo jirkaagu waa inay isdegaan. Heerarka magnesium ku filan ee nidaamka jirkaaga ayaa ka caawiya xasilinta maskaxdaada iyo jirka adoo dhaqaajinaya nidaamka dareemayaasha parasympathetic, kaas oo mas'uul ka ah dejinta iyo nasashada nidaamyada jirkaaga. Magnesium waxay maamushaa neurotransmitters, oo mas'uul ka ah inay soo diraan calaamadaha dhammaan maskaxdaada iyo jirkaaga. Dhanka kale, waxay sidoo kale nidaamisaa melatonin hormoon oo mas'uul ka ah hagidda wareegga hurdada-hurdada.
Magnesium waxay kuxiran tahay gamma-aminobutyric acid (GABA), kuwaaso ah neurotransmitter mas'uul ka ah dejinta howlaha dareemeyaasha. GABA waa isla 'neurotransmitter' loo isticmaalo soosaarka dawooyinka hurdada sida Ambien. Aamusnaanta habdhiska neerfaha wuxuu u diyaariyaa maskaxdaada iyo jirkaaga inaad seexato.
(2). Yaraanta magnesium-ka waxay faragelisaa hurdada
Kaliya la'aanta macdanta magnesium ee ku filan nidaamka jirkaaga waxay kuu horseedaa dhibaatooyin hurdo ama hurdo la'aan. Sidaa darteed, Magnesium L-threonate waxay muhiim u tahay hagaajinta heerarka macdanta ee jirkaaga si ay kuu damaanad qaado hurdo tayo leh. Daraasadaha caafimaadka waxay muujinayaan in heerarka magnesium ee fiicani ay lagama maarmaan u yihiin hurdada caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, heerarka magnesium ee sarreeya iyo kuwa hoose labadaba waxay u horseedi karaan dhibaatooyin hurdo, taasina waa sababta ay ugu habboon tahay inaad u tagto baaritaan caafimaad ka hor intaadan bilaabin qaadashada magnesium L-threonate qiyaasta.
Sababo kala duwan iyo xaalado caafimaad ayaa sababi kara yaraanta magnesium. Tusaale ahaan, cudurrada dheef-shiidka ee saameeya habka dheef-shiidkaaga waxay ku adkayn karaan jirkaaga inuu sifiican u nuugo macdanaha iyo fiitamiinnada, taasoo horseedda yaraanshaha magnesium-ka. Sonkorowga iyo iska caabbinta insulinta ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa luminta weyn ee magnesium.
Da'da ayaa waliba ah cunsur iyada oo dadka waaweyni ay cunaan cunto ay ku badan tahay magnesium ka yar kuwa waaweyn. Taas macnaheedu waa dadka waaweyn ee da'da weyn waxay halis ugu jiraan inay ku dhacaan calaamadaha yaraanta magnesium sida dhibaatooyinka hurdada. Aalkolada khamriga culus sidoo kale waxay u badan tahay inay lahaadaan yaraanta macdanta. Magnesium kugu filan macnaheedu waa inaad helaysid hurdo la wanaajiyey, taasina waa meesha Magnesium L-threonate uu ku yimaado si hufan.
(3). Jaangooyaa tayada hurdada
Magnesium waxay kaa caawineysaa inaad heshid nasasho iyo hurdo qoto dheer. Saamaynta macdanta ee nidaamka dareemayaasha ayaa kuu sahlaysa inaad hesho habeen hurdo tayo leh. Magnesium waxay ka horjoogsataa muruqyada inay ku xiraan neurons, sidaas awgeed waxay hoos u dhigaan nidaamka dareemayaasha, taasoo keenta hurdo tayo leh. Daraasado kala duwan ayaa muujiyay sida magnesium muhiim ugu tahay hurdada. Waqtigaan, daraasaduhu waxay xaqiijiyeen saameynta magnesium ee xalinta dhibaatooyinka hurdada ee dadka waayeelka ah.
maskaxda riska dhaafid impact Magnesium L-Threonate
Magnesium L-threonate wuxuu ahaa patenti ka dib markii la ogaaday awooddiisa ah inuu hagaajiyo heerarka magnesium ee maskaxda. Daawadani waxay si dhakhso leh u nuugtaa nidaamka jirka waxayna gashaa maskaxda si ay ugu suurtagasho magnesium inay ka laabato astaamaha gabowga maskaxda sida cilladda maqnaanshaha (ADHD). Tani ADHD si tartiib tartiib ah ayuu u kobcayaa sanadaha, waana ay adkaan kartaa in laga fiirsado marxaladihiisa ugu horeeya, laakiin xaaladdu waxay la xiriirtaa hoos u dhaca garashada.
Dadka da'da ah ee waaweyn waxay cunaan cunto leh magnesium ka yar, taasoo sharrax ka bixineysa sababta ay yaraanta magnesium ugu badan tahay iyaga. Waxa kale oo jira xaalado caafimaad oo kale sida dhibaatooyinka dheef shiidka iyo sokorowga kuwaas oo hoos u dhiga heerarka magnesium ee jirka. Magnesium waxay sare u qaadeysaa awooda shaqada ee dareemayaasha kala duwan, unugyada murqaha, iyo xubnaha jirka ee kala duwan.
Magnesium-ka oo aan ku filnayn maskaxda ayaa horseedaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin hurdo la’aan, walwal, niyad-jab, iyo sidoo kale waxay saameysaa hawlaha xusuusta iyo garashada. Si kastaba ha noqotee, saameyntu way ku kala duwanaan kartaa qof ilaa qof kale, laakiin magnesium L-threonate ayaa xallin kara iyaga oo kordhiya heerarka macdanta maskaxdaada.
Daraasado caafimaad oo kala duwan iyo tijaabooyin ayaa cadeeyay awooda magnesium L-threonate ee dib u celinta nidaamyada gabowga maskaxda. Raadinta soo baxday waa markii la ogaaday in Magnesium L-threonate ay beddeli karto in ka badan sagaal sano oo saameyn maskaxda ah. Daawadani waxay kordhisaa cufnaanta synapses-ka, taas oo ah isku xirnaanta xiriirka ka dhexeeya unugyada maskaxdaada - luminta cufnaanta synaptic waxay keenaysaa hoos u dhaca garashada iyo hoos u dhaca maskaxda.
Daraasadaha ayaa muujinaya in 12-usbuuc oo ah magnesium L-threonate maamulka ay kor uqaadeyso waxqabadka garashada isla markaana ay dib uga laabato da'da gabowga. Caadi ahaan, maskaxdu way sii yaraaneysaa marka aad sii gabowdo iyadoo ay ugu wacan tahay tirooyinka oo hoos u dhaca iyo shaqooyinka unugyada maskaxda iyo makiinadaha wareegga maskaxda, ee lagu tilmaamo inay yihiin sharoobo.
Lumida synapses-ka ayaa ah sababta koowaad ee ka dambeysa hoos u dhaca garashada garashada. Sidaa darteed, awoodda Magnesium L-threonate si kor loogu qaado cufnaanta synapses ayaa ka dhigeysa xusuusta ugu fiican iyo kaabista kor u qaadista garashada suuqa maanta. Mar haddii heerarka magnesium-ka ee maskaxdaadu ay kugu filan yihiin, waad hubsan kartaa inaad ka beddelayso dhibaatooyinka gabowga maskaxda. Baadhitaanka caafimaad kahor, inta lagu jiro, iyo kadib wareegga qiyaasta waxay muhiim u noqon doontaa in lala socdo horumarka daawada.
Maxaa kale faa'iidooyinka magnesium L-threonate?
Caafimaadka maskaxda iyo kor u qaadida tayada hurdada ma ahan faa'iidooyinka kaliya ee aad ka heli doonto qaadashada Magnesium L-threonate. Daawada waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa hagaajinta awooda shaqeynta ku dhawaad ​​unugyada iyo xubnaha jirkaaga. Magnesium waa macdan muhiim ah oo jirkaagu u baahan yahay inuu si sax ah u shaqeeyo. Waa kuwan qaar kale Faa'iidooyinka Magnesium L-threonate;
(1). Yaree Murugada iyo Walaaca
Labadan shuruudood waxay aad ugu badan yihiin dad badan maalmahan, waana sababao kala duwan. Si kastaba ha noqotee, magnesium waxay caddeysay awoodda ay u leedahay inay nidaamiso oo ay fududeyso niyad-jabka iyo walaaca. Badanaa, labadan xaalad maskaxeed waxay la xiriiraan yaraanshaha magnesium. Sidaa darteed, haddii aad ku yar tahay macdan maskaxdaada ku jirta, waxaad u badan tahay inaad la kulanto niyad jab iyo walaac.
Awoodda Magnesium ee lagu dejinayo nidaamka neerfaha ayaa ka caawiya yareynta labada xanuun ee niyadda. Welwelka magnesium L-threonate waa in lagu qaataa tilmaamaha dhakhtarka ee natiijooyinka wanaagsan.
(2). Waxay horumarisaa lafaha iyo murqaha caafimaadka qaba
Yaraanta magnesium waxay horseeddaa xanuun lugta iyo lafaha daciifka ah, badiyaa da'da. Magnesium L-threonate wuxuu kaloo daaweyn karaa osteoporosis oo caadi u ah dadka waaweyn. Dhanka kale, ciyaartooydu waxay u isticmaalaan dawadan inay ka caawiyaan dib u soo kabashada muruqyada kadib hawlahooda iyo wax soo saarka tamarta aerobic iyo anaerobic labadaba.
Faa'iidooyinka magnesium L-threonate way badan yihiin, daawadana waxaa loo isticmaalaa daaweynta xaalado caafimaad oo kala duwan. Tusaale ahaan, daroogada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka foosha, qalliinka, iyo laabta oo xanuun ka timaadda xididdada xididdaysan. Magnesium L-threonate sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa daaweynta maqal la'aanta, sonkorowga, fibromyalgia, iyo hoos u dhigista heerarka kalastarol ee xaaladaha kale ee caafimaadka.
Waa imisa? Magnesium L-threonate Miyaan qaataa?
Magnesium L-threonate waa daawo afka laga qaato. Daawada waxaa lagu heli karaa qaab kiniin ah iyo budo ah. Si kastaba ha noqotee, qiyaasta magnesium L-threonate qiyaasta waxay kuxirantahay adeegsadaha iyo xaalada daweynta. Dhakhtarkaagu wuxuu noqon doonaa qofka ugu fiican ee kuu dejin kara qiyaasta kugu habboon. In kasta oo ay jiraan soo-jeedinta soo-saareyaasha soo-saarradu had iyo goor waxay u baahan yihiin baaritaan caafimaad maadaama hababka jidhka bini-aadamka ay kala duwan yihiin.
Qiyaasta daawada magnesium L-threonate ee 19-30 sano jir ah waa 400mg (ragga) iyo 310mg maalintiiba dumarka. Muddo 31 sano ah iyo ragga ka weyn waa inay qaataan 420mg iyo dumarka 320mg maalintii. Gunnada lagu taliyay ee loogu talagalay dumarka uurka leh inta udhaxeysa 14 ilaa 18 sano waa 400mg, halka kuwa 19-30 sano jira ay yihiin 350mg halka 31-50 sano ay yihiin 360mg.
Dumarka xijaaban ayaa waliba dawadan u qaadan kara sida soo socota; 14-18 sano 360mg maalin kasta, 19-30 sano jir cabirkula taliyo waa 310mg halka 31-50 sano qiyaasta ay gaarayaan 320mg. Qiyaasta-magnesium L-threonate-ka maalin kasta ee heerka-sare ee qof kasta oo ka weyn sideed sano jir waa 350mg, taasna waxaa ku jira naasnuujinta iyo haweenka uurka leh.
Magnesium L-threonate waxaa loo isticmaalaa daaweynta xaaladaha caafimaad ee kaladuwan, qiyaasta sidoo kale waxay ku kala duwanaan kartaa hal isticmaale iyo mid kale. Tusaale ahaan, daaweynta cagaarshowga (dyspepsia), qiyaasta lagu taliyey ee u dhexeysa 400-1200mg waa in loo qaybiyo ilaa afar jeer maalintii.
Faa'iidooyinka ugu habboon ee garashada, qiyaasta lagu taliyey waa 1000mg in la qaato laba jeer maalintii. Markaad qaadanayso Magnesium L-threonate dhibaatooyinka hurdada, qiyaasta saxda ah waa inta u dhaxaysa 400-420mg maalin kasta ragga iyo 310-360mg dumarka. Isku soo wada duuboo, Magnesium L-threonate (778571-57-6) qiyaasta waxay ku kala duwan tahay hal isticmaale ilaa mid kale; Sidaa darteed, hubi inaad ka hesho dawada saxda ah ee daawadaada.
Wcunnooyinka koofiyaduhu waa ku badan yihiin Magnesium L-threonate?
Marka laga reebo qaadashada Magnesium L-threonate si kor loogu qaado heerarka magnesium-ka ee maskaxdaada, waxaad sidoo kale ka faa’iideysan kartaa cuntooyinka hodanka ku ah macdantaas. Cuntooyinkani waxay kaa caawin karaan inaad gaarto heerarka magnesium ee loo baahan yahay maskaxdaada oo aad ku raaxaysato dhammaan faa'iidooyinka macdanta. Waa kuwan qaar ka mid ah cuntooyinka ugu sarreeya ee hodanka ku ah Magnesium L-threonate;
Chocolate Dark- illaa inta ay macaan tahay oo caafimaad qabto, waxay xambaartaa 64mg oo magnesium ah oo 16% ka ah RDI. Marka laga soo tago taas, shukulaatada madow waxay sidoo kale hodan ku tahay naxaas, bir, iyo manganese iyo sidoo kale fiber prebiotic.
Avocados- mirahaan dhadhan fiican leh ee nafaqada leh waxay ku siin karaan 58mg oo magnesium ah oo qiyaastii 15% RDI ah. Miraha sidoo kale waxay hodan ku yihiin fiitamiinnada B, K, iyo il wanaagsan oo laga helo potassium.
Nutsare– sidoo kale loo yaqaanno inuu ka mid yahay ilaha dabiiciga ee ugu wanaagsan Magnesium L-threonate. 1-ounce oo ka adeegta jawaannada waxay leeyihiin 82mg magnesium oo 20% RDI ah.
Legumessuch- maadaama digir, digir, digir, iyo digirta soya ay qani ku yihiin macdano kaladuwan, oo ay kujirto magnesium. Tusaale ahaan, hal koob oo digir ah oo la kariyey ayaa ka kooban 120mg oo magnesium ah, taasina waa 30% RDI.
iibso magnesium L-threonate khadka tooska ah
Budada Magnesium L-threonate waa daawo si fudud loo heli karo labadaba dukaamada jirka iyo internetka. Waxaad ka iibsan kartaa daawadan raaxada xafiiskaaga ama gurigaaga waxaadna sugi kartaa dhalmada taas oo ay tahay inuu sameeyo alaab-qeybiye lagu kalsoonaan karo waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Kala tasho dhakhtarkaaga si uu kuugu hago helitaanka Magnesium L-threonate tayo leh iyo iibiyaha sumcad leh iyo khibrad leh. Kala duwan oo internetka ah Xerooyinka Nootropics kaydi dawadan ay ka mid yihiin Walmart, Amazon, iyo Magnesium L-threonate vitamin shoppe.
Waxa kale oo jira iibiyayaal kale oo khadka tooska ah laakiin had iyo jeer samee cilmi-baaristaada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iibiye kasta oo Nootropic ah ka hor intaadan dalban amarkaaga. Iibsashada Magnesium L-threonate waa in si taxaddar leh loola dhaqmaa iyadoo la qaadanayo tayo hoose, ama daroogada been abuurka ah waxay kuu soo bandhigi kartaa waxyeelo daran.
Akhriso dib u eegista Nootropics si aad waxbadan uga ogaato iibiyaasha khadka tooska ah ee Magnesium L-threonate adduunka oo dhan. Waqtigaan la joogo, Magnesium L-threonate amazon iyo Magnesium L-threonate Walmart ayaa ah ilaha ugu caansan Nootropic. Dukaamada internetka ayaa ugufiican maadaama ay kuu oggolaanayaan inaad wax ka iibsato waxyaabo kala duwan Kaabisyada Nootropic taleefankaaga, laptop ama kiniin. Fiiri muddada ay badeecada qaadan doonto in lagu geeyo goobtaada oo aad doorato heshiiska kuugu fiican adiga.
Magnesium waa macdan muhiim u ah kobcinta shaqada garashada, hagaajinta hurdada, iyo yareynta calaamadaha gabowga maskaxda iyo sidoo kale kor u qaadida unugyada jirka iyo xubnaha shaqeeya. Way kala duwan yihiin ilo magnesium ah, laga bilaabo daawooyinka ilaa cuntada dabiiciga ah. Maqnaanshaha magnesium wuxuu shakhsiyaadka u muujiyaa xaalado caafimaad oo kala duwan sida ADHD. Si kastaba ha noqotee, horumarinta Magnesium L-threonate ADHD waa war wanaagsan oo loogu talagalay shakhsiyaadka qaba heerarka hoose ee magnesium maadaama ay cadeeyeen inay daawo xoog leh u tahay calaamadaha yaraanta macdanta. Daawada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa adeegsiga kale ee caafimaadka sida yareynta xanuunka qalitaanka ka dib iyo xoojinta lafaha iyo caafimaadka muruqyada.
Marka aad fiirineyso dib u eegisyo kala duwan oo magnesium L-threonate ah, waxaad si awood leh u dhihi kartaa waxay ka mid tahay isha ugu weyn ee magnesium. Magnesium L-threonate waa dawo sharci ah, laakiin waa inaad ku hoos gashid warqadda dhakhtarku kuu qoro si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. Daawada waxaa laga heli karaa dukaamada jirka iyo internetka. Marna ha isku habeynin qiyaasta kor iyo hoosba adigoon u sheegin dhaqtarkaaga. Haddii ay jiraan waxyeelo kale waxaad isla markiiba la xiriirtaa daawadaada. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan magnesium L-threonate iyo kuwa kale nootropics iibsan, kala tasho xirfadlayaasha caafimaadka.
Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Shuruucda cufnaanta qaabdhismeedka iyo shaqeynta ee loo yaqaan 'L-threonate' iyada oo loo marayo wax ka beddelidda isku-uruurinta isku-dhafka magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Waxqabadka Catalase (CAT), ALT iyo AST ee Xubno Kala Duwan oo Switzerland Albino Jiir ah oo lagu daaweeyay Lead Acetate, Vitamin C iyo Magnesium-L-Threonate. Joornaalka Cilmi-baarista Clinical & Diagnostic, 11(11).
Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Magnesium-L-threonate-ka cuntada ee joogtada ah wuxuu dedejiyaa baabi'inta wuxuuna yareeyaa soo-kabashada degdegga ah ee ka-noqoshada dhadhanka shuruudaysan. Farmashiga Qalabka Biochemistry iyo Dabeecadda, 106, 16-26.
Abumaria, N., Luo, L., Ahn, M., & Liu, G. (2013). Kordhinta Magnesium waxay xoojisaa kala-soocidda qaab-durugsan ee duruufaha waxayna ka hortagtaa isu-soo-celinta cabsida. Farmashiyaha dhaqanka, 24(4), 255-263.
1.Waa maxay Magnesium L-threonate?
2.Maxay u shaqaysaa Magnesium L-threonate-ka?
3.Ma Magnesium L-threonate wuxuu kufiican yahay hurdada?
4.Kaabo soo celinta saameynta Magnesium L-Threonate
5.Waa maxay faa iidooyinka kale ee magnesium L-threonate?
6.Hor intee le'eg ayay qaadanaysaa Magnesium L-threonate?
7.Waa cuntooyinkee ku badan Magnesium L-threonate?
8.Buy Magnesium L-threonate khadka tooska ah